SHALAY IYO MAANTA’ Xusuusta Soomaaliya iyo caalamka | Explorations in History and Society
SHALAY IYO MAANTA’ Xusuusta Soomaaliya iyo caalamka
Bar AMA Baro The Somali News (The Government Weekly News Paper) laakin xasuustaasi waxa ay i hilmaansiisay Maqaalkii aan qor islahaa.iga raali noqo marka aan soo xasuusto ayaan qori doonaa.
Ninkii tashan waaya waa loo talin” murti ayaa dhahaysa, haddaba maxaa diiday in Soomaali loo taliyo hadday tashan waysay? Dhibka waxaa keenay in qolo walbaa qolada kale ku eeganayso dhibka, dayaca, duruufta iyo diihaalka, ayna dhammaatay walaaltinimo iyo darisnimo, haddaba miyeysan dhaamin in nala maamulo maadaama aan is maamuli weynnay, wali waan is giijinaynnaa, ma xumo, balse waa in la helaa dad ay daacad ka tahay qowl iyo fal dhaba, haddii kale Maan maran iyo maqaam muran!
Wadanka dhan waa holcayaa, muqdisho habeen walba dagaal ayaa ka dhaca, gobolada dhexe xabashi ayaa qabsatay, Kenya, Gedo iyo Jubbooyina ayey dadkii ku xasuuqaysaa, waxyeelladii abaarahu wali ma dhammaan, ee maangaabnimo miyaa ka weyn inaan sidaan ku sii jirno?
Maangaabnimo miyaa ka weyn inaan sidaan xal u aragno? Maangaabnimo miyaa ka weyn inaan ku jirno isku shaanshayn iyo magacaabid? Maangaabnimi miyaa ka weyn inaan ku dulwareegno dabadhilif? Maan maran iyo maqaam muran!
Beesha Caalamku (Beesha lixaad ) waxay noo sheegtey in naloo talinaayo Isku Si Wax Ma U Qiimaysan Karnaa?